ePR iri Kuputsa Kushambadzira ... muEurope | Martech Zone
GDPR yakaunzwa May 2018 uye zvaive zvakanaka. Zvakanaka ndiko kutambanudza. Matenga haana kuwira mukati uye munhu wese akafamba nezvezuva rake. Zvimwe zvisina kumisikidzwa kupfuura vamwe. Sei? Nekuti yaisimbisa kupihwa pachena, kwakatarwa, kuziviswa uye kusanzwisisika kubvumidzwa kwaive zvino kwave kudikanwa kubva kumugari weEuropean kambani isati yatumira email.
Hazvina kushambadza otomatiki hofori dzenyika, maHubSpots, maMarket, etc. havana kutiudza zvemukati ndimambo?
Kana iwe ukagadzira icho, uye ukachimisa icho, uye uchichisimudzira icho, ivo vanouya!
Gadzira shasha x10 zvemukati, gadzirisa, bhurogira nezvazvo uye tarisiro uchaiwana, kurodha pasi uye tarira iwe unenge uine yavo yekutaurirana uye iwe uchave unokwanisa kuvachengeta ivo vachishandisa otomatiki emaimendi macampaign ane chenjedzo akagadzirirwa kukuzivisa iwe kana ivo vari yakagadzirira kutenga (nekuti ivo vanove vari pawebhusaiti yako vachitarisa pazasi peiyo faneli zvemukati eg kesi zvidzidzo, demo vids nezvimwewo).
Kwete zvekare - kwete munyika yeB2C zvakadaro. Kana ivo vadzora iyo x10 shasha yezviri mukati, uye vosiya yavo yekudyidzana, ivo vanofanirwa kunongedza kabhokisi kadiki kanoti:
Ndiri kufara kuti iwe utumire email kwandiri nguva nenguva kutengesa uye kushambadzira mameseji.
Saka… ndiani achazosarudza kupinda mukutengesa nekutengesa mameseji?
Uye nekudaro izvo zvechinyakare zvemukati / inbound / email kushambadzira inokwezva -kuregedza-padhuze kuteedzana iko zvino kwatyoka B2C kushambadzira.
Ipapo kwakauya ruzha rwekuseka kwakapera simba.
"Ruzha urwo chii?"Vakadaro vatengesi veB2C, misodzi yavo yakasviba kumeso vachitarisa-tarisa kutsvaga vanotambudza vane utsinye.
Yaiva ruzha rwevatengesi veB2B vachirova ngonono.
Iwe unoona GDPR haina kuremadza kushambadzira kweemail B2B (iyo yagara iri tsika yakareruka). Iwe zvaungoda chete kuratidza kuti iwe une hwaro hwepamutemo hwekutonhora email kutaurirana. Inogona kunge iri mvumo. Asi zvinogona zvakare kuva… kufarira chaiko. Chero bedzi iwe uchigona:
… Ratidza mashandisiro aunoita data revanhu akaenzana, ane mashoma kuvanzika, uye vanhu havazoshamiswa kana kupokana nezvauri kuita…
Hofisi yeKomisheni yeRuzivo, Mitemo yakatenderedza bhizinesi kushambadzira bhizinesi, iyo GDPR uye PECR
Uye vatengesi veB2B vakaita uswa apo zuva raipenya.
Haina kupenya kwenguva yakareba zvakadaro.
Iyo ePrivacy Regulation (ePR ipfupi) ichatsiva iyo yazvino European ePrivacy Directive (iyo inotsanangurwa nenzira dzakasiyana nenzira dzakasiyana munyika dzenhengo dzeEU - kuUK inozivikanwa se PECR).
The DMA yakashuma muna Chikunguru gore rapfuura iyo ePR yaizoda… 'kujekesa kusarudza kubvumidzwa kune ese B2B email kushambadza'.
Hapasisina zvinyorwa. Hapasisina kurodha pasi mukutsinhana ruzivo rwekufonera. Mhoro B2B email kushambadzira. Izvi zvakakura.
Semuenzaniso, ini ndinoshanda muUK yeIT indasitiri zvakanyanya. Iyo IT chiteshi yakanyatso kuvakwa paemail shots. Mazhinji maB2B maindasitiri ari. Kune zvese kukanganisa kwayo, ichiri kupa inomanikidza ROI uye kune akawanda makambani madiki, ndiyo yega mhando yekushambadzira yavanofunga kuti vanogona kuwana (zvimwe pane izvo gare gare).
Kune chero ani wenyu achifunga uyu mutemo unonzwika zvisingaite zvine hukasha uye B2B email kushambadzira ingangove yakanaka, zvakafanira zvakare kufunga nezve kukanganisa ePR ichave nekuki.
Muna Kurume gore rino, chipangamazano akazvimirira kudare repamusoro soro reEU, Advocate General Szpunar, akaburitsa pfungwa pama cookies uye zvinyatso taura kuti bhokisi rakabvumidzwa kare rekiki rekubvumidza harina kuzadzisa zviga zvekubvumidzwa chaiko sezvo kubvumidzwa kwanga kusinga shande kana kupihwa pachena.
Mangani mawebhusaiti aunoshanyira nevanotemerwa kuki maboxer? Vazhinji vavo handiti?
Tiri kunyatso tarisa ramangwana rausingakwanise kutumira email kuvanhu kumakambani (kunze kwekunge vabvumirana nazvo) uye haugone kuteedzera vanhu pavanenge vari pawebhusaiti yako (kunze kwekunge vapinda mumakuki). Iko kuki chinhu cheichi chiporofita chave kuitika muUK: iyo ICO inoti kubvumidzwa kunodiwa kumakuki asina kukosha uye iwe wakazvifungidzira, analytics inowira mukati meiyo isiri-yakakosha chikamu (enda kune iyo ICO webhusaiti - analytics inodzimwa nekukanganisa * kufema kwekutyisa *).
Iyo ePR yaifanirwa kusunungurwa pamwe chete neGDPR asi yakanonoka. Zvinotora nguva kugadzirisa mvumo muParamende yeEuropean uye hapana zuva rekuburitsa zviri pamutemo (mashoma mablogiki emutemo anoti pamwe kwete pamberi pa2021) asi iri kuuya uye pane yakakosha nguva diki yekugadzirira.
Kunyangwe iwe uchizviti iyo fanera kana flywheel, iyo yekare inopinda nzira inotaridzika kunge yakaputswa.
Saka takabvunza shamwari yedu yekutengesa otomatiki zvekuita (iyo izwi neshoko email hurukuro inogona kuwanikwa pane yedu blog), asi TL: DR: kanganwa iyo yekurera, enda pasi penzvimbo, wakagadzirira kutenga inotungamira - ane hunyanzvi tarisiro.
Uye ini handina kukwanisa kubvuma zvimwe.
Chinhu chakanaka ndechekuti, SEO (yaitwa nenzira kwayo), ichiri chipenyu uye kurova. Organic yekutsvaga ichiri kutora iyo yakawanda kuwanda kwekudzvanya maringe nekubhadharwa kushambadzira (heino iyo yazvino yekudzvanya data pane izvo) uye Google inoda kuti iwe uwane SEO chaiko uye yaita kuti zvive nyore kupfuura nakare kose vatungamiriri vakuru uye yakagadziridzwa vhezheni yeKutsvaga Console.
Kutanga kufunga nezve zvinogona kuitika zvePRR pane rako bhizinesi. Iwe unovimba zvakadii kushambadziro yeemail? Yakawanda sei yako B2B dhatabhesi yasarudza kupinda? Unogona here kuvabvumirazve pamberi? Iwe unofanirwa kururamisa kushambadzira otomatiki kuedza kuti utarise pamusoro pekutengesa vatengi varipo pane kusimudzira vatsva? Uri kushanda nesimba pane yako yekutsvaga yekutsvaga? Uye zvakanyanya kukosha, chii chauri kuzoita izvozvi iwe unoda kuti vashandisi vabvumire kuteverwa pane yako saiti? Tora dzimwe nzira dzako dzakarongedzwa uye dzakagadzirira kunhonga usimbe, uyezve pese panotangwa ePR, mune chero chimiro chainozotora, hausi kuzosara uchinhonga zvidimbu.
Tags: b2bhukurueprivacy mutemoeumarketopecrzvakavanzika mutemochengetedzo
Luke Budka director kuTopLine Comms, yedhijitari PR uye SEO agency.
Maitiro Ekuchengetedza Saiti Yekutamburira Yemukati-Yakatungamirwa Kubatanidza Campaign